जसपाको अध्यक्षमा महन्थ र उपेन्द्र, वरिष्ठ नेतामा बाबुराम भट्टराई चौथो वरियतामा ! - Lekhapadhee
लेखापढी २५ जेष्ठ २०७७, आईतवार २२:२९
काठमाडौं । समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल मिलेर बनेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ । दल दर्ताका लागि पाएको समयको अन्तिम दिन आइतबार मात्रै पार्टी पदाधिकारीको बारेमा सहमति जुटेपछि दल दर्ता भएको हो ।
दल दर्ता भएपछि जसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले दुई अध्यक्ष र तीन जना वरिष्ठ नेताको नाम राखेर ५३ सदस्य कार्यकारी समितिको तर्फबाट दल दर्ता भएको बताए । उनले जसपाको कार्यकारी अध्यक्षमा महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव रहने सहमति भएको र वरिष्ठ नेतामा डा. बाबुराम भट्टराई, अशोक राई र राजेन्द्र महतोको नाउँमा सहमति जुटेको बताए ।
नवगठित जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) भित्र पहिलो वरियता दावी गर्ने डा.बाबुराम भट्टराईले दोस्रो नम्बरमा चित्त बुझाएका थिए । तर निर्वाचन आयोग नेपालसम्म पुग्दा उनको दुई नम्बरमा रहेको नाममा टिपेस्ट लागेर एकाएक चौथो वरियता हुन पुगेको छ ।
सरकारले दल फुटाउन सहज हुनेगरी अध्यादेश ल्याएपछि गत बैशाख १० गते समाजवादी पार्टी र राजपा नेपालबीच एकीकरण गर्ने सहमति भएको थियो ।
बैशाख ११ गते दुवै पार्टीका नेताहरु आयोग पुगेर एकता बारे लिखित जानकारी गराएका थिए । आयोगमा लिखित जानकारी गराएको ४५ दिन भित्रमा दल दर्ता गराउनुपर्ने प्रावधान अनुसार अन्तिम दिन आइतबार जसपाका नेताहरुले दल दर्ता गराएका हुन् ।